Soatoavina sy fomba : mirakitra kolontsaina malagasy ny landy | NewsMada
Soatoavina sy fomba : mirakitra kolontsaina malagasy ny landy
Manana ny mampiavaka azy maneran-tany ny lamba landy malagasy. Ankoatra ny endrika ivelany, mirakitra sy mifamatotra amin’ny kolontsaina malagasy ity karazan-damba iray ity. Tsy nisaraka tamin’ny Malagasy ny lamba landy satria velona nitafiana, maty nifonosana. Nakana, ohatra ho an’ny tokantrano vao raha mbola biby ny landy. Hoy ny Malagasy : « Ataovy toy ny tokantranon-dandy, ao anatiny manatevina ». Fitiavana tsy mifanaraka, « saro-tiavina toa landy mohaka ». Nentina nanoharana ireo malai-miasa koa ny landy rehefa mby eo amin’ny fanenomana ny dingana arahina : « Ikaladala ambodin-tenona, sady tsy hanohy ny tapaka no tsy hanala saritaka ».
Mbola tsara ny lamba landy malagasy
Antoka iray mbola mahatsara ny lamba landy malagasy ny fanaovana azy amin’ny tanana. Tsy mampiasa milina goavana mandeha amin’ny herinaratra, toy ny fahita any Sina ny mpanenona, fa mbola fitaovana tsotra ahafahana manara-maso tsara ny vokatra. Mbola manana karazan-dandy (biby) tsara ihany koa i Madagasikara. « Na izany aza, kely ny famokarana landy eto amintsika », hoy Atoa Jocelyn, tompon’andraikitra teknika eo anivon’ny kaoperativa Rakotomalala & Fils « lambamena ». Anisan’ny antony mahatonga izay ny tsy fananan’ny Malagasy faharetana eo amin’ny fikarakarana azy ity, izay nomarihiny fa maro lalana diavina mandrapahatonga azy ho lamba. « Mila fikajiana fatratra ihany koa anefa izany mba tsy ho « fatim-boka mikararana » ilay fiompiana landy, ka raha iray no marary, ripaka ao anatin’ny herinandro ny landy rehetra », hoy hatrany, ity mpahay momba ny lamba landy ity.
« 30 taona tsy niova »
Mahavariana ! Lamba landy no iantsoana azy raha ho an’ny velona fa lambamena kosa raha hamonosana ny maty. Ilay ranom-paty amin’ny fotoana maha lo azy no mamelona (sakafo) ny selan’ny landy ao amin’ny lambamena, ka mahatonga fahatezany hatrany amin’ny 30 taona. Izany hoe, velona sy miaina ilay sela mandrafitra ny landy rehefa izy tonga lambamena. Tsy mampakiana (maina) ny lambamena ilay fofona sy hamandoana aterak’ilay faty, raha ny fanazavan’ity mpahay momba ny landy ity hatrany.
Raha eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, anisany mifaninana amin’ny lamba landy malagasy ny avy any Azia.